‘द रक’ ले एउटा इन्स्टाग्राम पोस्टबाट कमाउँछन् १० करोड, कति कमाउँछिन् प्रियंका ? – Jagaran Nepal
इन्स्टाग्राममा गरिएको एउटा पोस्टले कसले कति कमाउन सक्ला ? यति रकम कि सायद तपाईंले पत्याउनै सक्नु हुन्नँ होला सोसल मिडिया कम्पनी हापर एचक्यू डटकमले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्ने सेलिब्रिटीको वार्षिक सूची ‘इन्स्टाग्राम रिच लिस्ट २०२०’ जारी गरेको छ । यो सूचीका अनुसार ड्वेन पहिलो स्थानमा छन् र इन्स्टाग्राममा आफ्नो पोस्टमार्फत् १० लाख डलर
अर्थात् १० करोड रुपैयाँ कमाउने गर्छन् । मिरर अनलाइनको रिपोर्ट अनुसार चार वर्षमा पहिलो पटक कार्दासियां वा जेनर यो सूचीको शीर्ष स्थानमा छैनन् । जोनसनको कमाईमा १५ प्रतिशतको वृद्धि भएकमो छ जबकी काइली जेनरको कमाईमा २२ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
यो सूचीमा क्रिकेटर विराट कोहली प्रियंकाभन्दा एक स्थान अघि छन् । विराट २६ औं स्थानमा छन् । र उनी इन्स्टाग्राम पोस्टमार्फत् २ लाख ९६ डलर अर्थात् ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् ।हिन्दुस्तान टाइम्स